Syi Lwin Foods Garden | Food Magazine Myanmar | Page 18
ပုစွန်ထုပ်ကြီးကင်နှင့် အာရှဂေါ်ဖီသုပ် (BBQ King Prawn with Asian Cabbage Salad)
ပုစွန်ထုပ်ကြီးကင်နှင့် အာရှဂေါ်ဖီသုပ် (BBQ King Prawn with Asian Cabbage Salad) တစ်ခါတလေ ပုစွန်ဟင်းချက်စားရတာ ငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ထမင်းတွဲစားရတာ အီလယ်လာတဲ့အခါမျိုးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း လိုက်ဖက်ညီကောင်းမွန်သော ပုစွန်ကင်နဲ့ အသီးအရွက်သုပ်လေးကို မျှတသောအာဟာရများပါဝင်တာကြောင့် လုပ်စားကြည်လိုက်ဦးနော် . . . ....
ပျာယာခတ် ပြည်ကြီးငါးချက် (Quick Squid Stewed)
ပျာယာခတ် ပြည်ကြီးငါးချက် (Quick Squid Stewed) အလုပ်များသောသူများအတွက် အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် ဟင်းတစ်ခွက်ချက်နည်းလေးပါ။ အချိန်တိုတို စားချင်ဖွယ်ရာကောင်းသော ဟင်းလျာတစ်ခွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စည့်အကြိုက်လည်းဖြစ်ပြီး အားလုံးလည်း ပြန်ချက်စားကြည့်လို့ရအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ပြည်ကြီးငါး – ၃ဝ ကျပ်သား (အတုံးသေးသေးလေးတွေ ....
Thai Spicy Salad Dressing နှင့် ကြက်တောချက် (Country Style Chicken with Thai Spicy Salad Dressing)
Thai Spicy Salad Dressing နှင့် ကြက်တောချက် (Country Style Chicken with Thai Spicy Salad Dressing) လွယ်ကူလျင်မြန် ထမင်းမြိန်စေသော ဟင်းတစ်ခွက်ကို အာရုံများစရာမလိုဘဲ Thai Spicy Salad Dressing ဖြင့် ချက်လို့ရတဲ့နည်းလေး ....
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ (Kaw Yay Khauk Swe) အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်သော ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလေးက ခေါက်ဆွဲတွေထဲမှာ ငါးပိထောင်းလေးနှင့် တွဲစားရသောခေါက်ဆွဲဆိုပြီး လူငယ်တွေအကြိုက် ချဉ်စပ်လေးကတော့ ဘယ်အချိန်ပဲဆွဲဆွဲ ပြီးပြည့်စုံသော အရသာကို အမြဲခံစားရမှာပါ။ စည့်ရဲ့ ချက်နည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ကော်ရည်လုပ်ရန်) ♦ ခေါက်ဆွဲ ....
အာရှ ကြက်သားသုပ် (Asian Chicken Salad)
အာရှ ကြက်သားသုပ် (Asian Chicken Salad) ဆီကို နေ့စဉ်အသုံးများသောသူများအတွက် ဆီမပါဘဲ အရသာရှိရှိစားနိုင်မယ့် ကြက်သားသုပ်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက်ပေါင် – ၂ ပေါင် (ပြုတ်ထားပါ) ♦ နံနံပင် – ၁ စည်း ....
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့် ဘဲသားချိုစပ်ချက် (Mix Spices Spicy Sweet Duck Curry)
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့် ဘဲသားချိုစပ်ချက် (Mix Spices Spicy Sweet Duck Curry) အရသာလေးက မေ့မရနိုင်သလို အနံ့လေးကလည်း အမှတ်တရဖြစ်စေသော ဘဲသားချိုစပ်လေးကို ခေါက်ဆွဲ၊ ထမင်းတို့ဖြင့် တွဲစားလို့လိုက်ဖက်တာကြောင့် အားလုံးအတွက် ချက်စားလို့ရအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဆီသတ်ရန်) ♦ ကြက်သွန်ဖြူ ....
ပုစွန်ထုပ်ဟင်း (King Prawn Curry)
ပုစွန်ထုပ်ဟင်း (King Prawn Curry) ပုစွန်ထုပ်ဟင်းဆို ထမင်းဝိုင်းမှာ အားလုံးရဲ့မျက်နှာလေးတွေက အပြုံးနှင့်အတူ သိပ်ကိုအရသာရှိမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုများ ဇွန်းအဆင်သင့်ပြင်လို့ စောင့်နေသော ပုစွန်ချစ်သူများအတွက် . . . ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဆီသတ်ရန်) ♦ ကြက်သွန်ဖြူ – ၅ ....
ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်ပေါင်ချက် (Chicken Drumsticks with Tomatoes)
ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်ပေါင်ချက် (Chicken Drumsticks with Tomatoes) ကြက်ပေါင်ကို ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ချက်ထားတဲ့ အရသာလေးက တစ်မျိုးလေး စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အီတလီခေါက်ဆွဲ (သို့) ထမင်း တို့ဖြင့်လည်း တွဲဖက်စားလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက်ပေါင် – ၈ ခု ....
ပွင့်ညွှန့်ကြော် (Pumpkin and Gourd Flowers with Shoots Stir-Fried)
ပွင့်ညွှန့်ကြော် (Pumpkin and Gourd Flowers with Shoots Stir-Fried) ရာသီပေါ် အပွင့်အညွှန့်လေးတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြော်စားလို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ဖရုံပွင့် – ၁ စည်း (အပွင့်ထဲမှအဆံများ ထုတ်ထားပါ) ♦ ဖရုံညွန့် ....